छोरीले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि…. | छोरीले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि…. – हिपमत
छोरीले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि….
समाजमा जातीय विभेदका कारण निकै गम्भीर परिणामहरु देखिने गरेका छन् । यस्तै एउटा घटना सोमबार भएको छ । २४ वर्षकी छोरीले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि उनका मातापिता र भाइले इनारमा हाम्फालेर आत्महत्या गरेका छन् ।यो घटना भारतको महाराष्ट्रको गडचिरोलीको हो ।
गडचिरोलीका रविन्द्र वरगंटीवारको अर्को जातीका युवकसँग प्रेम थियो । उनले पितासँग आफूले तिनै युवकसँग विवाह गर्न चाहेको बताएकी थिइन् ।
परिवारले भने उनको यो विवाह गर्ने चाहना स्वीकार गरेनन् । परिवारले आफूहरुको सम्बन्ध अस्वीकार गरेपछि ती छोरीले प्रेमविवाह गर्ने भन्दै शनिबार घर छाडेर हिँडिन् । आइतबार उनले तीर्थषेत्र मार्कण्डादेव मन्दिरमा विवाह पनि गरिन् ।
यो विवाहबाट परिवार निकै दुःखी भए । आफन्तहरुले निकै सम्झाउँदा पनि वरगंटीवार परिवार निकै तनावमा आयो । यही कारण तीनैजनाले सामूहिक आत्महत्या गर्ने फैसला गरे । सोमबार दिउँसो १२ र १ बजेको बीचमा उनीहरु आनन्दनगरको खुल्ला ठाउँमा भएको इनारमा पुगे । त्यहाँ आफूहरुसँग भएको सामान किनारामा राखेर तीनैजनाले इनारमा हाम्फाले ।